Nkọwapụta kachasị mma nke Eprel 2021 | Top 5 nyiwe wIth Low Fes anyị!
Ngwongwo ahia kacha mma - Kedu ahia ahia kachasị mma na 2021?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye ego ma ọ bụ na-azụ ahịa n'ịntanetị - ị ga-emepe akaụntụ na usoro ịzụ ahịa kachasị elu. N'ihi uto ngwa ngwa nke ebe a na-ere ahịa na-ere ahịa, e nwere ugbu a ọtụtụ narị usoro ntanetị azụmaahịa n'ahịa.
Enwere ike inye ọtụtụ n'ime ndị ọrụ a nnukwu ebe - ma ọ bụ n'ihi enweghị iwu, nkwado maka obere akụ, ma ọ bụ ụgwọ na-enweghị isi. N'iburu nke ahụ n'uche, ịkwesịrị ịme ụfọdụ ihe omume ụlọ iji chọpụta ụdị azụmaahịa dị mma maka mkpa gị.
Iji chekwaa ọtụtụ awa nke nyocha, ntuziaka a ga-enyocha ya Ngwongwo ahia kacha mma nke 2021. Ndị anyị depụtara aha anyị kachasị elu na-ahụ ọtụtụ njirisi gbara gburugburu ụgwọ dị ala, ụkpụrụ siri ike, ikpo ahịa, yana nnukwu ahịa ndị ahịa.
Ngwongwo ahia kacha mma 2021 enyocha
Ikwughachi, usoro ntanetị kachasị na-enyocha na ibe a niile na-ezute usoro nke usoro dị mkpa.
Feesgwọ na ụgwọ ndị ọzọ
Otutu klas na ahia
Usoro nke atọ nwere mmasị nke FCA, CySEC, ma ọ bụ ASIC
Onu ogugu nke nyocha na nyocha
Ọrụ ndị ahịa kachasị elu na ahụmịhe onye ọrụ
N'iburu ihe niile dị n'elu n'uche, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ndị na-eweta ọrụ mere ndepụta anyị nke usoro ntanetị kachasị mma nke 2021.
1. eToro - Usoro ahia kachasị mma na 2021
N'ịnwale ma nwalee ọtụtụ usoro ntanetị n'ime ọnwa ole na ole gara aga, anyị enweghị oge ọ bụla n'inye eToro ebe mbụ anyị. Ihe kachasị mkpa bụ na ikpo okwu a dị elu na-egosi igbe niile dị mma na mpaghara ọ bụla anyị na-achọ. Nke mbụ, eToro bụ ma ahịa azụmaahịa na ụlọ ọrụ na-ere ahịa.
Nke a pụtara na ị nwere ike itinye ego na ahia ọtụtụ akụ. Banyere nke mbụ, eToro na-akwado puku kwuru puku abụọ na narị abụọ + na ETF sitere na mgbanwe mba iri na asaa. Ọ bụrụ n ’ị na-anụ ọkụ na cryptocurrencies dị ka Bitcoin na Ethereum, eToro na-enye mkpụrụ ego dijitalụ iri na isii.
N'ihe banyere ngwá ahịa maka atụmatụ dị mkpirikpi, eToro na-akwado ihe niile site na Forex na ọlaedo na ntinye na gas. N'agbanyeghi ihe ị kpebiri itinye ego na ya ma ọ bụ ịzụ ahịa, eToro agaghị ana gị otu pasent na ọrụ. Enweghị ụgwọ ọnwa ọ bụla, ị ga-ahụkarị na mgbasa na-asọ mpi.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke akpaghị aka trading, eToro ka ị kpuchie. Site na ngwa ahia ahia ya, nke a na - enye gi ohere inweta otutu puku ndi gosiputara pro pro. Ozugbo ị họrọ nke masịrị gị, ị nwere ike họrọ ịhọrọ i copyomi ha dịka-ihe-like-like. Still ka ga-enwe ike itinye ma ọ bụ wepu akụ na pọtụfoliyo gị, yabụ ị ka na-ejikwa ego gị.
E nwekwara CopyPortfolios na eToro, nke na-enye atụmatụ ntinye ego zuru ezu. eToro mekwara ka ọnụọgụ anyị bụrụ ebe ntanetị kacha mma nke 2021 n'ihi na ọ dị mma maka ndị na-etinye ego na-enweghị atụ. N'ezie, ikpo okwu dị mfe iji nke ahụ ma ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-ere ahịa n'ịntanetị, ị gaghị enwe nsogbu gbasara igodo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụda nke ihe a n'elu-gosiri trading n'elu ikpo okwu na-enye, eToro akaụntụ nwere ike imeghe na nkeji. Nwere ike iji ego debit / kaadị akwụmụgwọ, ekwentị, ma ọ bụ obere akpa - tinye ego na akaụntụ gị - opekata mpe bụ $ 200. N'ikpeazụ, eToro debara aha na FINRA (US) ma na-achịkwa ya FCA (UK), ASIC (Australia), na CySEC (Cyprus)
A na-enye ọtụtụ akụ
Commissionzụ ahịa ọrụ Zero na enweghị oke azụmahịa
2. EightCap - Platform of Trading kacha mma maka Commission-Free CFDs
Y’oburu na ichoro ikpo okwu ahia CFD kacha mma - inwere ike itule EightCap. Agbanyeghị na onye na - eweta ya nwere ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ahịa na 200 - ọ na - ekpuchi klaasị azụmaahịa kachasị ahịa na ọnọdụ itinye ego. Nke a gụnyere ikpo ego abụọ, ego na-acha anụnụ anụnụ, isi ihe dị mkpa, ọla edo siri ike dịka ọla edo, na ume.
Nyocha anyị banyere ahịa a kachasị elu achọpụta na onye na-eweta ọrụ na-eweta usoro ọnụahịa iji dabara ụdị ndị ọchụnta ego niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa obere ego, EightCap ga-enye gị akaụntụ na-enweghị ọrụ na mgbasa na-agbasa ịmalite 1 pip. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa nnukwu mpịakọta, ịnwere ike izere ịgbasa kpamkpam ma kwụọ ụgwọ ọrụ nke $ 3.50 kwa slide.
Ihe ndekọ abụọ ahụ e kwuru na mbụ chọrọ nkwụnye ego kachasị naanị $ 100. You nwere ike ịkwụ ụgwọ akaụntụ gị site na iji debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ - ma Visa na MasterCard kwadoro. I nwekwara ike itinye ego na Skrill, Neteller, Skrill, na ndị ọzọ. Na usoro nke isi atụmatụ, Eightcap dakọtara na-ewu ewu-atọ ndị ọzọ trading nyiwe MT4 na MT5.
Ọ na-enyekwa nza n'ụzọ nke ọdịnaya agụmakwụkwọ, ihe nyocha, na nghọta ahịa. Banyere nchekwa, Eightcap nwere ezigbo aha na ntanetị n'ịntanetị. Nke a na-akwado nke ọma site na ikikere ASIC ya - nke bụ otu n'ime usoro iwu kachasị sie ike na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego.
With Kwekọrọ n'Ozizi na MT4 na MT5
3. Capital.com - Usoro ahia kachasị mma maka ndị mbido
Capital.com bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na onye nhazi usoro ịzụ ahịa kacha mma maka ndị mbido. Onye a ma ama n’enye gi ohere imeghe nnabata na nkeji ma igha enweta ebe ngosi ngosi ihe ngosi zuru ezu. Nke a na - enye gị ohere ịmụta ụdọ nke azụmaahịa n'ịntanetị na - enweghị itinye ego ọ bụla n'ihe egwu. Cannwekwara ike iji ọtụtụ ngwa agụmakwụkwọ nke Capital.com nyere - dị ka ntuziaka na ndị nkọwa vidiyo.
Mgbe ahụ, mgbe ị chere na ị dịla njikere ịmalite ịzụ ahịa na isi obodo gị, usoro a ma ama na-achọ nkwụnye ego kachasị naanị $ 20. Banyere ihe ị nwere ike ịzụ, Capital.com bụ usoro azụmaahịa CFD. Ọ na-ekpuchi ọtụtụ puku ahịa gafee ọtụtụ klas akụ - gụnyere ebuka, cryptocurrencies, commodities, and indices. Also na-azụkwa ahịhịa abụọ - na-ere ahịa na-ekpuchi majors, umuaka, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Azụmahịa ego ọ bụla nke Capital.com na-akwado nwere ike ịbụ ahịa n'efu. On isi CFD akụ dị ka isi ụzọ abụọ ego na ebuka - mgbasa na-abụkarị ụlọ ọrụ na-eduga. Banyere usoro azụmaahịa n'onwe ya, Capital.com dị mfe iji. Ọ bụrụhaala na ị nwere nghọta bụ isi nke ịtụkwasị iwu, ịkwesighi inwe nchegbu gbasara arụmọrụ.
Dị ka usoro ntanetị kachasị mma a tụlere na ibe a, Capital.com na-enye ego. Ọzọkwa, oke gị na ọnọdụ gị ga-ekpebi oke gị. N'ihe banyere nchekwa, a na-enye ikike ma na-achịkwa Capital.com ọtụtụ ndị a ma ama - gụnyere FCA na CySEC. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị kpebie ịbanye na onye ọrụ a kachasị elu, ịnwere ike iji kaadị akwụmụgwọ / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ waya ụlọ akụ.
Ọtụtụ puku ahịa ịzụ ahịa na-enweghị ọrụ
Bido na $ 20
Enweghị ngwá ọrụ nyocha dị mkpa
4. AvaTrade - Ngw’oru ahia ahia di nma nke di elu nke ngwa oru nyocha
AvaTrade bụ usoro ahịa azụmaahịa ọzọ dị elu nke pụrụ iche na ahịa CFD - ha niile na-akwado ire ere na mkpụkọ. Onye a ma ama na-enye gị ohere ịzụ ahịa n'ofe ọtụtụ nyiwe - gụnyere MT4. Ọ na-akwadokwa ngwa ahịa azụmaahịa ndị ọzọ dịka Zulutrade.
Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa ozugbo na ebe nrụọrụ weebụ AvaTrade, onye na-eweta ọrụ na-enye usoro nke ya. Ma n'ezie - a naghị ahapụkwa ndị na-azụ ahịa ekwentị, dị ka AvaTrade na-enye ngwa ngwa zuru oke. Nke a dị na ma iOS na gam akporo.
Ahịa ndị akwadoro na AvaTrade na-abanye n'ime puku kwuru puku, na-ekpuchi ihe niile site na Forex na ngwaahịa na ngwaahịa na ahịa. Nwekwara ike ịzụ ahịa cryptocurrencies, nhọrọ, na ọdịnihu. N'ihe banyere ịzụ ahịa ego, AvaTrade bụ ikpo okwu na-enweghị ọrụ na-enye mgbasa dị egwu. Nke a gụnyere pipụ 0.9 na isi ụzọ abụọ yana 0.13 na ngwaahịa CFDs na-acha anụnụ anụnụ.
Ọ bụ ezie na AvaTrade na-enye akaụntụ ngosi, ị nwekwara ike ịzụ ahịa na obere obere na ikpo okwu a. Nkwụnye ego na-amalite naanị $ 100 ma ị nwere ike iji akaụntụ debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ waya akụ tinye ego na akaụntụ gị. Ikekwe otu n'ime ihe kachasị mma nke AvaTrade bụ nke a na-enye ikikere n'ọtụtụ ọchịchị. Nke a gụnyere Canada, Australia, Europe, South Africa, Japan, na ndị ọzọ.
Ezi ego kacha mma nke $ 100
Iwu na otutu mba
Nnukwu nke akụ na-enweghị ọrụ iji zụọ ahịa
Arụghị ụgwọ ụgwọ weere elu
5. EuropeFX - Ebe ahia di elu di elu na otutu nyiwe
EuropeFX bụ usoro ahịa azụmaahịa ọzọ kachasị elu nke toro na ewu ewu na nso nso a. Onye na-eweta ọrụ ahụ na-enye gị ohere ịnweta ahịa ahịa zuru oke - nke a na-akwado CFDs niile. Nke a pụtara na ị nwere ike itinye ihe nkwụnye ego ma soro na ire ere mkpụmkpụ. Klas akụnụba akwadoro gụnyere Forex, indices, shares, commodities, na cryptocurrencies.
N'ihe banyere usoro ahia n'onwe ya, EuropeFX na-enye gị ọtụtụ nhọrọ. Nwere ike ịhọrọ MT4 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ngwa ahịa azụmaahịa dị elu - nke dị site na weebụsaịtị EuropeFX ma ọ bụ ngwanrọ desktọọpụ.
Kedu ụzọ ọ bụla, EuropeFX bụ oke nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-agbasa mgbasa ozi dị ala, ebe ahịa ahịa na-amalite site na naanị 0.1 pips. Na nchekwa, EuropeFX nyere ikike ma dezie ya site na CySEC. Ibido site na ikpo okwu azụmaahịa a kachasị elu chọrọ nkwụnye ego kacha nta nke $ 200 - na ndị na-eweta nkwado debit / kaadị akwụmụgwọ, e-wallets, na nnyefe ego.
E nwere ọtụtụ ụdị akaụntụ ịhọrọ site na - nke ọ bụla na-abịa dị iche iche opekempe, ọrụ na ụgwọ ọrụ dị iche iche. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọkwa ọkwa dị elu na-enye mgbasa na asọmpi asọmpi kachasị elu, n'agbanyeghị, a ga-atụ anya na ị ga-ezute opekempe dị elu.
Adabara seasoned ahịa
Super asọmpi na-agbasa
Ndị CySEC na-achịkwa ya nke ọma
Akaụntụ zuru oke nke $ 50,000
Etu esi achọta nyiwe ahia kacha mma?
Yabụ ugbu a na anyị enyochala usoro ntanetị kachasị mma na ahịa dị n'ịntanetị, ugbu a, anyị kwesịrị ịkọwa ọtụtụ ọnụọgụ ịchọrọ iji lelee tupu ịhọrọ otu n'onwe gị. Nke a bụ n'ihi na nyiwe azụmaahịa abụọ adịghị otu.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ nyiwe nwere ike ịpụta maka ngwa ọrụ azụmaahịa ha dị elu na ihe ngosi nka na ụzụ - ndị ọzọ nwere ike ịrịọ ndị ahịa maka obere ụgwọ ha na mgbasa. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịchọpụta ihe kachasị mkpa gị bụ mgbe ị na-achọ usoro ịzụ ahịa kachasị mma maka mkpa gị.
A tụlere ihe ndị kachasị mkpa ị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Iwu, ikikere, na nchekwa
Nanị ụzọ ị ga - esi nweta ego site n'ịzụ ahịa n'ịntanetị bụ itinye ego na ikpo okwu ị họọrọ. N'aka nke ya, nke a pụtara na enwere mkpa inwe ntụkwasị obi site na njedebe gị. A sị ka e kwuwe, usoro ịzụ ahịa a na-ekwu maka ya agaghị abụ naanị ọrụ maka ijikọ gị na ahịa ego ịchọrọ, mana ọ kwesịrị idobe ego gị.
N'iburu nke a n'uche, ị kwesịrị ịdebanye aha naanị na ikpo okwu ahịa ma ọ bụrụ na ọ nwere ikike ma dezie ya ma ọ dịkarịa ala otu ụlọ a ma ama. N'ebe ahia n'ịntanetị, ndị kachasị ego na-achịkwa ego gụnyere:
Ọ bụrụ n’otu n’ime ihe ndị dị n’elu nyere ikikere iji usoro azụmaahịa gị ahọpụtara, ị ga - ejide n’aka na ọ na - eme ihe niile n’akwụkwọ. Ọ bụrụ na o meghị ya, onye na-achịkwa ihe a na-ekwu maka ya ga-enwe ọtụtụ mmachi na ya - dịka iwu ego.
N'okwu ndị siri ike karị, onye na-achịkwa nwere ike ịhọrọ iwepu ikikere azụmaahịa azụmaahịa. Na mgbakwunye na ịnwe anya na-echekwa ego gị, ịhọrọ usoro ịzụ ahịa azụmaahịa na-abịa na ọtụtụ uru ndị ọzọ bara uru.
KYC: Ọ bụ ezie na njikwa KYC (Mara Onye Ahịa gị) nwere ike ịbụ ihe mgbu, ha na-eme ka gị na ndị ahịa ibe gị ghara ịdaba na mpụ ego. Mgbe ị na-eji oge ọhụụ ọhụụ dị ka eToro, a ga-akwado akwụkwọ gị na ihe na-erughị nkeji ole na ole.
Ego Ndị Ahịa: Usoro ntanetị a na-achịkwa ga-ekewapụ ego ndị ahịa na nke ha. Nke a pụtara ịchekwa ego gị na akaụntụ ụlọ akụ echekwara. N'ụzọ dị oke mkpa, usoro azụmaahịa a na-ekwu maka ya enweghị ike iji ego gị kwụọ ụgwọ nke ya.
Nghọta :gwọ: Site na iji usoro azụmaahịa ejiri achịkwa, ụgwọ niile, ọrụ, na mgbasa ga-enwerịrị ike ịnweta. Ikwesiri inwe mmebi zuru oke nke ebubo ọ bụla na akaụntụ gị site na dashboard gị. Nke a na-achota na ị maara ihe ị na-akwụ mgbe ị na-eji usoro ịzụ ahịa.
Na ngwụcha, ọ bụrụ na imeghe akaụntụ na azụmaahịa a na-achịkwaghị achịkwa - ma ọ bụ nke enyere ikikere na agwaetiti dị na mmiri, ego gị nọ n'ihe egwu. Ọ bụ ya mere anyị ji Mụta 2 Trade naanị họrọ nyiwe ahia nke usoro nke otu na-achịkwa nke ọma.
A na - enwekarị ọdịiche dị ukwuu n'ahịa ndị ị na-azụ ahịa na-enye gị ohere ịbanye. Dika anyi kwuburu na mbu, ufodu ndi mara ihe na klas nke ndi ozo ebe ndi ozo na-ekpuchi otutu puku ngwa oru ego na ebuka, ahia ahia, ahia ahia na ihe ndi ozo.
Na nke ahụ kwuru, enwere otu ihe karịsịa na ịchọrọ inyocha na nyocha gị maka usoro ntanetị kacha mma - ọ bụkwa gị bụ ịkwụsị na akụ ma ọ bụ trading EGO.
Nweta nyiwe ahia ahia
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na usoro ịzụ ahịa ị họọrọ na-enye gị ohere itinye ego na akụ, ị na-azụ ya kpam kpam. Nke a pụtara na ị ga-ejigide ikike zuru oke nke ajụjụ a.
Karịsịa, nke a gụnyere akụ dịka:
Ebuka na mbak
Mgbe ị na-etinye ego n'ime akụ ndị dị n'elu site na ikpo okwu ahia, ị na-eme nke a site na ịzụta na ijide usoro ogologo oge. Yabụ, ị ga-azụta akụrụngwa ahụ, hapụ itinye ego na azụmaahịa ị họọrọ, wee ree ya ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọtụtụ afọ.
Na ụzọ, ị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, ebe ị nwere ngwaahịa ma ọ bụ ego. N'ihe banyere agbụ, ị ga-enwe ikike maka oke nke ịkwụ ụgwọ coupon gị.
Ọ bụ ezie na anyị na-ekpuchi ụgwọ ikpo okwu azụmaahịa n'ọtụtụ oge karịa, ọ dị mkpa ka ịhọrọ onye na-eweta ọrụ anaghị akwụ ụgwọ na-aga n'ihu mgbe ị na-eme atụmatụ itinye ego na ogologo oge. Nke a bụ n'ihi na ịchọrọ nhọrọ nke ịchekwa ego gị ogologo oge ị hụrụ na ọ dị mma na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ gị kwa ọnwa ma ọ bụ ụgwọ kwa afọ.
Nzube ahia CFD
Na njedebe ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere oge dị mkpirikpi nke chọrọ iwepụ ahịa ahịa ọkaibe karịa, ọ ga-abụrịrị na ị ga-adabara maka ikpo okwu ahịa CFD. CFDs - ma ọ bụ nkwekọrịta-maka esemokwu, bụ ngwa ọrụ ego nke na-agbaso akụ na ụba oge. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọla edo nwere ọnụahịa ahịa nke $ 1,860 kwa ounce, dị ka ngwa CFD dị iche.
Isi ihe iji cheta bụ na mgbe ị na-ere ahịa CFDs, ị nweghị akụ. Ọ bụ ezie na ị lelee gị nke mbụ, ọ nwere ike ịhapụ gị, nke a na-abịa na ọtụtụ isi uru.
Nwere ike ịzụ ahịa dị ka ọla edo, mmanụ, na gas na-enweghị mkpa ichegbu onwe ma ọ bụ nchekwa ma ọ bụ nkesa
Nwere ike ịhọrọ ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ na ahịa ị họọrọ
You nwere ike itinye ihe mgbakwunye gị trades
N'aka nke ọzọ, a ghaghi iburu n'uche na nyiwe ahia CFD dabara adaba maka atumatu obere oge. Nke a bụ n'ihi na ndị CFD na-adọta ụgwọ ego abalị na ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ maka nke ọ bụla ị na-eme ka azụmahịa ahụ meghee. Ọ bụ ezie na ọ na-abụkarị nkeji, ụgwọ ndị a ga-eri uru gị bara uru. Nke a bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị ahịa CFD ga-eji azụ ahịa ụbọchị ma ọ bụ usoro ịzụ ahịa ahịa.
Platformszọ ntanetị kachasị mma na-enye gị ohere ịzụta ma ree akụ na ụzọ bara uru. Na nke ahụ kwuru, nyiwe ndị a ka na-azụ ahịa iji nweta ego - yabụ ị kwesịrị ịlele iji hụ ihe ụgwọ ga-adaba na ahịa ma ọ bụ atụmatụ ị họọrọ.
Ego kachasị mkpa ịchọpụta tupu ị debanye aha ndị a:
Mgbasa ahụ bụ ego na-enweghị isi nke ọtụtụ newbies anaghị achọpụta. Maka ndị na-amaghị, ọdịiche dị na ịkwụ ọnụ n'etiti 'ịzụta' na 'ree' ọnụahịa nke ngwa ahịa ị na-ere n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, ọnụahịa ịzụta na Bitcoin nwere ike ịbụ $ 38,000 ebe ọnụahịa ere nwere ike iguzo na $ 37,500. Ihe dị iche n'etiti ọnụahịa abụọ a ka amara dị ka mgbasa.
Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, usoro ịzụ ahịa ị họọrọ na-akwụ ụgwọ mgbasa nke 3 pips na GBP / USD, nke a pụtara na ịkwesịrị ịme uru nke pips 3 naanị iji mebie.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na mgbasa na ọlaọcha CFDs ruru 0.5%, ịkwesịrị ịme uru nke 0.5% iji mebie ọbụna.
Site na nyocha anyị na Mụta 2 Trade chịkọtara, anyị chọpụtara na nyiwe kachasị mma maka ịzụ ahịa na-enye gị ohere ịzụ ahịa ụzọ abụọ bara uru site na-erughị 1 pip. N'ihe banyere nnukwu ebuka na ihe ndị dị ka ọlaedo 0, mgbasa ahụ ekwesịghị ịba karịa 0.25%.
Ọ bụ ezie na mgbasa bụ anọ ego a na-akwụ ụgwọ site na nyiwe ahia, ọrụ ga-abịa site na njikwa akaụntụ gị. A na-ebo ebubo ọrụ a mgbe ị debere ịzụta ma ọ bụ ree ahịa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọrụ ahụ ga-abụ pasent na-agbanwe agbanwe nke agbakọtara megide osisi gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụ ahịa na-akwụ ụgwọ ọrụ nke 1.5% iji zụọ ahịa gas, na ị ga-etinye $ 1,000, ị ga-akwụ $ 15 iji banye n'ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na mgbe ahụ i rere ọnọdụ gas gị mgbe ọ ruru $ 1,100 - ọrụ gị 1.5% ga-abụ $ 16.50.
Ọ bụ ezie na ihe atụ ndị a dị n'elu adịghị aka aka, ha na-egosi na isslọrụ nwere ike iri ngwa ngwa n'ihe ị nwetara. Nke a bụ ihe kpatara ọtụtụ nyiwe kachasị mma eji enyocha na ibe a na-enye gị ohere ịzụ ahịa n'ịntanetị na-enweghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla. Kama, nyiwe ndị a na-enweta ego ha site na mgbasa ahụ ekwuru n’elu.
Ụgwọ ndị ọzọ
E nwere ọtụtụ ụgwọ ndị ọzọ nke usoro ịzụ ahịa ị họọrọ nwere ike ịgba ụgwọ, dị ka:
Ego abali: Dịka anyị kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ị kpebie ịzụ ahịa CFD, ị ga-akwụrịrị ụgwọ ego abalị. Dabere n'ahịa na oke nke osisi gị, ego ahụ na-abanyekarị n'oge ụfọdụ nke ụbọchị.
Ego Platform: Ma ọ bụghị ya, ana-ekwu dị ka ụgwọ mmezi, ụfọdụ nyiwe na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa ma ọ bụ ego kwa afọ. Ọ bụrụ na ha emee, a gbakọọ ọnụọgụ ego ole ị tinyere na ikpo okwu.
Ego nkwụnye ego / wepụ ego: Lelee nkwụnye ego na nkwụghachi ụgwọ, ọzọ, nke a nwere ike ịhapụ gị ọghọm tupu ị tinye azụmahịa.
Ngwongwo ahia kachasị mma bụ ihe doro anya banyere ụgwọ ha na-akwụ, yabụ ị ga-enwe ike ilele nke a site na weebụsaịtị nke onye na-eweta ya.
Nyiwe na ojiji
Tradingfọdụ ebe ntanetị na-enye usoro ntanetị nke ha nke e wuru site na ala. N'ọtụtụ oge, a na-echepụta ihe ndị a na ndị mbido n'uche. Iji maa atụ, eToro na-enye usoro azụmaahịa azụmaahịa dị oke mfe iji.
Nke a bụ ikpe site na weebụsaịtị ya na ngwa mkpanaka. Site na nke ahụ kwuru, mgbe ị na-eji usoro azụmaahịa ọhụụ na-enwe ọhụụ, enwere ike ịnweta njedebe gị na ngwaọrụ ndị dị elu na njirimara teknụzụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa nwere oge na-achọ ime nyocha miri emi, ọ ga-akacha mma iji ikpo okwu na-akwado MT4 ma ọ bụ MT5. cTrader bụ nhọrọ ọzọ, kwa.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ dị mkpa iji nyochaa nka gị na ahụmịhe gị mgbe ị na-ahọrọ usoro ịzụ ahịa, ebe ụfọdụ na-elekwasị anya na ndị ọhụrụ ma ndị ọzọ dabara adaba maka ndị ọkachamara.
Ngwaọrụ Platform na Akụkụ
Enwere ọtụtụ ngwa ahia na atụmatụ iji tụlee mgbe ị na-abanye n'elu ikpo okwu. A na-enye ha ihe ndị a iji nyere gị aka na njem azụmaahịa gị.
Offọdụ n'ime ihe ndị ama ama ngwaọrụ nke ndị kasị mma trading nyiwe na anyị tụlere gụnyere:
Social na Detuo ahia
Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụụ zuru ụwa ọnụ nke itinye ego, ị nwere ike ịtụle nyiwe na-enye mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-edepụta atụmatụ azụmaahịa. Dịka ọmụmaatụ, eToro, ndị na-enye usoro ịkekọrịta 'soshal midia' nke na-enye gị ohere ikwukọrịta na ịkekọrịta echiche n'etiti ndị ahịa ndị ọzọ.
Ọbụghị naanị na ịnwere ike ibipụta ma zaghachi ederede, mana ị 'masịkwara' ihe ị kwenyere na ya. Nke a mepụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ịzụ ahịa ị gaghị ahụ na onye na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ ochie. Na mgbakwunye na nke a, eToro na-enyekwa otu ngwa ahịa azụmaahịa na-enye gị ohere ịmekọrịta mkpebi itinye ego gị kpamkpam.
Na-enyocha ihe site na ọtụtụ puku ndị ahịa ahịa ahịa na eToro - na-elele metrik dị ka nloghachi kwa ọnwa na njirimara bara uru
Invest na-etinye $ 500 n'ime onye ị họọrọ
Onye ahịa ahụ na-ekenye 7% nke pọtụfoliyo ha n'ime ebuka Paypal na 5% n'ime ngwaahịa Visa
N'aka nke gị, ị na-etinye $ 35 na-akpaghị aka n'ime ebuka Paypal (7% nke $ 500) na $ 25 n'ime ego Visa (5% nke $ 500)
Mgbe onye ahịa ahụ rere ọnọdụ ha na Paypal ma ọ bụ Visa, ị ga-eme otu ihe ahụ na akpaghị aka
Na mkpokọta, usoro ntanetị kachasị mma na-enye mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ngwaọrụ itinye ego dị mma ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe dị ukwuu na oghere ahụ. A sị ka e kwuwe, ịnwere ike ịdabere na onye na-etinye ego n'oge na-agwa gị okwu, na-enye gị ohere ịnọdụ ala na azụmaahịa.
Y’oburu n’inweghi ohere inweta oke ahia ahia, onwere ike isiri gi ike inweta uru bara uru. O doro anya, ịnwere ike ịnweta uru 10% kwa ọnwa - mana ọ bụrụ na ịnwee nguzozi nke $ 1,000 - nke ahụ bụ uru nke naanị $ 100. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, belụsọ ma ịnwe nnukwu akaụntụ ị nwere, ị nwere ike ịchọpụta uru ị na-erite.
Nke a bụ ihe kpatara nyiwe kachasị mma maka ịzụ ahịa ji enye gị ohere ịme ihe. Na itinye ego n'ọrụ gị, ị nwere ike zụọ ọtụtụ ihe karịa na akaụntụ gị.
Dịka ọmụmaatụ, ndị ahịa US nwere ike ịnweta ntinye aka ruo 1: 50 mgbe ha na-azụ ahịa ụzọ abụọ dị ka EUR / USD. Nke a pụtara na nkwụnye $ 1,000 ga-ekwe ka ọnọdụ kachasị elu nke $ 50,000
Usoro ntanetị nke Europe na-ekpuchikarị ndị na-ere ahịa na 1:30 na isi ego abụọ na obere na akụ ndị ọzọ
Mba ndị ọzọ enweghị oke ma ọlị, nke pụtara na ụfọdụ nyiwe azụmaahịa ga-enye ikike itinye ego karịa 1: 500
Naanị jide n'aka na ị ghọtara ihe egwu nke ịzụ ahịa azụmaahịa. Emechakwa, ị nwere ike ịkwalite isi ahia gị, nke dị mma. Ma, ị nwere ike ịkọbawanye ọghọm gị ngwa ngwa.
Ndị ahịa kachasị agba agba ga-adabere kpamkpam na njirimara teknụzụ, ebe nke a na-enye ha ohere inyocha ọnụahịa nke akụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe ngosi nke na-enyocha ego, olu, ma ọ bụ ọbụlagodi.
Kedu ụzọ ọ bụla, ndị na-egosi teknụzụ na-enye gị ohere ịchọpụta usoro ọnụego na-adịbeghị anya yana otu nke a nwere ike isi metụta atụmatụ ọdịnihu nke ọdịnihu. Anyị na-ahụ na usoro ntanetị kachasị mma na-enye ọtụtụ ihe ntanetị maka ị ga-etinye, n'akụkụ ọtụtụ ngwa eserese eserese.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na usoro ịzụ ahịa enweghị ike ịnye ihe ngosipụta aka ọrụ n'onwe ya, ọ nwere ike dakọtara na MT4, MT5, ma ọ bụ cTrader. Ọ bụrụ na ọ bụ, usoro ntanetị ndị a nke atọ na-abịa na ngwa nyocha nke eserese nke ị ga-achọ.
Nkwụnye ego, Ego, na ịkwụ ụgwọ
Anyị ga-atụ aro ịlele usoro ịkwụ ụgwọ nke onye ọrụ ị họọrọ na-enye tupu ị gafee mmeghe akaụntụ na usoro KYC. A sị ka e kwuwe, ịkwesighi ịgafe rigmarole nke na-ebugote akwụkwọ ID wee chọpụta na ikpo okwu anaghị enye usoro nkwụnye ego gị.
Emehiela banyere ya - usoro ntanetị kachasị mma na-enye gị ohere itinye ma wepụ ego na debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ obere akpa - dị ka Paypal. Ndị a bụ nchekwa, nchekwa, na ikekwe kachasị mkpa - ụzọ ịkwụ ụgwọ ozugbo. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-enwe ike itinye ego mgbe ọ bụla ị hụrụ na ọ dị mma - ọbụlagodi mgbe ị na-eji ngwa ahịa azụmaahịa mkpanaka.
Na nke ahụ kwuru, ụfọdụ nyiwe azụmaahịa na-akwado inyefe ụlọ akụ - ọkachasị na US. Nke a pụtara na ị ga-echere ụbọchị ole na ole tupu ego enweta ahia. Tụkwasị na nke a, lelee iji hụ ihe ụgwọ ịkwụ ụgwọ na-emetụta yana ma a ga-atụ anya ụgwọ FX n'aka gị.
Ihe omumu akwukwo
Usoro a nwere ike ọ gaghị amasị ndị nke ị na - azụ ahịa azụmaahịa - mana ọ ga - adị ma ọ bụrụ na ị na - amalite. N'ụzọ dị oke mkpa, nyiwe azụmaahịa kachasị mma anyị tụlerela taa na-enye ọtụtụ usoro agụmakwụkwọ.
Nke a gụnyere ihe niile site na obere-ọmụmụ, ntuziaka na nyocha teknụzụ, nghọta ahịa, pọdkastị, na webinars. Site na ịhọrọ usoro ịzụ ahịa nke na-enye ihe ndị a, ị nwere ike ịmụ etu esi azụ ahịa n'ụzọ egwu.
Ibido Iji Platform Trading - Walkthrough
Ozugbo ịchọtala usoro azụmaahịa ịchọrọ n'anya, ị ga-aga n'ihu ịmepe akaụntụ, nyochaa njirimara gị, itinye ego, yana n'ezie - itinye azụmaahịa.
N'okpuru anyị ga-ejegharị gị site na usoro ntọala gị na usoro eToro nke kachasị elu - nke ga-ewe gị karịa 10 nkeji site na mmalite ruo n'isi.
Kwụpụ 1: Deba aha na Akaụntụ
Ga-ebu ụzọ mepee akaụntụ na ebe nrụọrụ weebụ eToro. Nwere ike ime nke a n'ịntanetị ma ọ bụ site na ihe nchọgharị weebụ gị na mkpanaka.
Nke a bụ usoro mmeghe akaụntụ nke ị ga-achọ ụfọdụ ozi gbasara gị n'aka gị - dịka aha gị, ebe gị, ụbọchị ọmụmụ gị na nkọwa kọntaktị gị.
Kwụpụ 2: Nyochaa njirimara gị
Dika ikpo okwu ahia, eToro kwesiri inyocha njirimara gi. Nke a agaghị ewe gị karịa nkeji ole na ole, ebe ikpo okwu na-enwekarị ike inyocha akwụkwọ ozugbo.
Ikwesiri bulite otu akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala yana akwụkwọ na-enyocha adreesị ụlọ gị. Nke a nwere ike ịbụ ụgwọ ọrụ ma ọ bụ nkwupụta akaụntụ ụlọ akụ na eToro. A nabatara mbipụta dijitalụ, kwa.
Kwụpụ 3: Mee ego
Nkwụnye ego kacha nta na eToro bụ $ 200, ma ọ bụ $ 50 maka ndị nke ị dabere na US. Nwere ike ịkwụ ụgwọ akaụntụ gị ozugbo mgbe ịchọrọ maka otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ ndị a:
eToro na-akwado inyefe ụlọ akụ mpaghara, mana nke a nwere ike iburu ebe ọ bụla site na elekere ole na ole ruo ụbọchị ole na ole ịhazi ya.
Kwụpụ 4: Chọọ maka Ahịa ahia
Ozugbo etinyere ego gị, ị nwere ike ịmalite ahia. eToro bụ ebe obibi ọtụtụ puku ahịa n'ofe ebuka, ETFs, indices, cryptocurrencies, commodities, and forex.
Nwere ike ịchọgharị ahịa ndị a site na ịpị bọtịnụ 'Ahịa Ahịa'. Ọ bụrụ na ị maraworị ahịa ị chọrọ ịzụ, tinye ya na igbe ọchụchọ. Wee, pịa bọtịnụ 'Trade'. N'ihe atụ anyị, anyị na-achọ Mastercard.
Kwụpụ 5: Debe Azụmaahịa
Igbe igbe ga-apụta ugbu a na ihuenyo. Nke a bụ ebe ịkwesịrị itinye nkọwa maka azụmahịa gị.
Firstly, mkpa ka ị họrọ si a Buy ma ọ bụ na-ere iji. Site na ndabara, eToro na-edozi igbe ahụ ka ọ zụta ihe, nke pụtara na ị chere na akụ ahụ ga-aba uru. Mana, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga mkpụmkpụ, ị ga-agbanwe nke a ka ọ bụrụ ire ere.
N'ihe atụ anyị, anyị na-achọ itinye ego na MasterCard ebuka na ogologo oge, yabụ anyị hapụrụ usoro a dị ka iwu ịzụta. Anyị na-ezere ịbanye na leverage, yabụ anyị nwere ebuka kpam kpam.
Ikwesiri itinye osisi gị na dollar US. Anyị na-ahọrọ opekempe, nke bụ $ 50. Opekempe na eToro belatara $ 25 mgbe ị gbanwere crypto.
Ka o sina dị, tinye ọnọdụ anyị anyị pịa bọtịnụ 'Open Trade'. Ma nke ahụ bụ ya, anyị free-Commission free ahia na-egosi!
Note: Ọ dịkwa mma ịtọlite ​​usoro nkwụsị na nkwụ-uru. Nke a ga - ahụ na ị nwere usoro doro anya na ebe ị na - azụ ahịa n’ụzọ dị egwu.
Ngwongwo ahia kacha mma - Mkpebi ahụ?
Chọta ikpo okwu kachasị mma maka mkpa gị abụghị ihe dị mfe na 2021. A sị ka e kwuwe, e nwere ugbu a ọtụtụ narị ndị na-enye ọrụ na oghere a - ha niile na-asọ mpi gị azụmahịa.
Ozugbo ị kwadoro na a na-achịkwa onye na-eweta ọrụ ahụ, na-akwado ahịa ndị kachasị amasị gị, ma na-enye ụgwọ ịsọ mpi - ị kwesịrị ilele usoro metrik gburugburu na atụmatụ, ịkwụ ụgwọ, na njirimara-onye ọrụ.
Na mkpokọta, anyị chọpụtara na usoro azụmaahịa kachasị mma na-arụ ọrụ na ebe ịntanetị ugbu a bụ eToro. Onye na - enye ọrụ - nke nwere nde mmadụ iri na asaa na-azụ ahịa n'okpuru ya, na-enye gị ohere ịzụta ma ree ọtụtụ puku akụrụngwa ego na ntọala enweghị ụgwọ ọrụ.
Kedu usoro ikpo okwu kachasị mma 2021?
Mgbe anyị nyochachara ọtụtụ nyiwe azụmaahịa, anyị chọpụtara na eToro dị iche na igwe mmadụ. Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịzụ ahịa na enweghị ụgwọ ọrụ, mana a na-achịkwa onye na-eweta ya nke ọma.
Kedu usoro ahia kachasị mma maka ndị mbido?
eToro bụ usoro ịzụ ahịa kachasị mma maka ndị mbido - ọkachasị ma ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-etinye ego n'ịntanetị. Enweghị ihe ọ bụla a chọrọ iji nwee nghọta nke jargon ahịa ma ọ bụ nyocha nyocha iji jiri ikpo okwu, obere osisi dị ala, ị ga-enwekwa ike ịnweta akaụntụ ngosi ihe egwu na-adịghị ize ndụ.
Kedu usoro ikpo ahia nwere ọtụtụ ngwaahịa?
Y’oburu na ichoro ikpo okwu ahia di nma maka ebuka, eToro bu ulo 2,400 + gafere ahia iri na asaa. Nke a pụtara na ị nwere ike itinye ego na ụlọ ọrụ ndị edepụtara na US, UK, Hong Kong, Germany, na ndị ọzọ!
A na-achịkwa nyiwe ahia?
Ee, usoro nhazi azụmaahịa kachasị mma na-achịkwa ndị na-enye ikikere ikikere. Karịsịa, chọọ ụdị FINRA, FCA, ASIC, na CySEC - ebe ozu ndị a nwere aha ọma maka idebe ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị.
Ego ole ka ịchọrọ ịzụ ahịa n'ịntanetị?
Site na ọtụtụ ndị ọhụrụ na-abanye na ntinye ego n'ịntanetị, ugbu a enwere nyiwe azụmaahịa na-arụ ọrụ na oghere nke enweghị iwu nkwụnye ego kacha nta. Nke a pụtara na ị nwere ike ịmalite ahia na ego ị na-enwe ntụsara ahụ.
Onye edemede: Kane Peppi
Banyere chepụtara: Kane Peppi
Emelitere ikpeazụ: February 9th, 2021
Kane Pepi bụ onye Britain na-eme nchọpụta na onye edemede na-ahụ maka ego, mpụ ego, na teknụzụ blockchain. Ugbu a dabere na Malta, Kane na-ede maka ọtụtụ nyiwe na ngalaba ịntanetị. Karịsịa, Kane nwere nkà n'ịkọwapụta isiokwu ego dị mgbagwoju anya n'ụzọ omume enyi na enyi. N’agụ akwụkwọ, Kane nwere nzere bachelọ na ego, nzere nna ukwu na mpụ na mmebi ego, ọ nọkwa ugbu a na Doctorate Degree na-enyocha egwu iyi egwu ego nke akụ na ụba blockchain. Kane nọkwa n'azụ akwụkwọ ndị ọhụụ na-enyocha - nke gụnyere nyocha miri emi banyere mmekọrịta dị n'etiti ịchụ ego na ndị na-ede akwụkwọ na UK. I gha achota ihe Kane na weebụsaịtị dika Ego, na Onye nzuzu, N'imeBitcoins, Agbụrụ, Mụọ akwụkwọ, na Maltatù Ndị Malta nke Ndị Isi Nkwenye.